Dhaqdhaqaaqyada La Xiriira: Haddii aan isticmaalno Software Bilaash ah, innaguna ma waxaan nahay Hackers? | Laga soo bilaabo Linux
Dhaqdhaqaaqyada La Xiriira: Haddii aan isticmaalno Software-ka Bilaashka ah, innaguna ma waxaan nahay Hackers?
Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ah iyo Linux oo leh Dhaqdhaqaaqa Hacker
Inbadan ayaa si gooni gooni ah loo sheegay, halkan Blog-ka iyo Global Internet Ecosystem oo ku saabsan Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ah (SL) iyo Dhaqdhaqaaqa Hacker. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dad badan oo aan si buuxda ama si buuxda u aqoon taariikhda labada dhaqdhaqaaq. Hadana waxay leeyihiin shaki, haddii midkood kan kale la xiriiro, ama haddii ay iska soo horjeedaan ama la xiriira.
Xitaa su'aasha ah "Haddii aan isticmaalno Software-ka Bilaashka ah, miyaan nahay Hackers?" nuxurkiisuna inta badan waa wax lagu maadeysto (Memes and Kaftan) oo ay iska leeyihiin iyo dibedba Bulshooyinka labada Dhaqdhaqaaq. Laakiin maxaa run ka ah su’aasha noocaas ah? Guurkee ayaa markii hore timid? Miyuu kii ugu horreeyay saameyn ku yeeshay abuurista iyo / ama horumarka kan kale? Su'aalahan iyo kuwa kaleba waxaan isku dayi doonnaa inaan ku caddayno qoraalkan yar ee dulucdiisu tahay mowduuca.
1.1 Taariikhda Soomaaliya
2 Dhaqdhaqaaqyada farsamo-siyaasadeed iyo / ama Teknolojiyada-bulshada
2.1 Dhaqdhaqaaqa Hacker
2.1.2 Muhiim ah
2.2 Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ah
2.2.2 Muhiim ah
3 Xiriirka ka dhexeeya Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ah iyo Dhaqdhaqaaqa Hacker
Marar kale DesdeLinux Blog waxaan ku taabannay mowduucyo la mid ah ama la xiriira hal ama labadaba fikradaha, taas oo ah, Software Bilaash ah iyo Hackers. Ka mid ah qodobbada ugu dambeeyay ee aan ka xusi karo aniga:
«Waxbarashada Hacking: Dhaqdhaqaaqa Software-ka Bilaashka ah iyo Nidaamka Waxbarashada"iyo
«Crypto-Anarchism: Barnaamijka bilaashka ah iyo dhaqaalaha farsamada, mustaqbalka?«.
Laga soo bilaabo Blogger «ChrisADR» maqaalka la yiraahdo: «Runtii muxuu macnaheedu yahay Hacker?«.
Dad badanna xiriirka iyo asalka labada «Teknolojiyada-Teknolojiyada iyo Dhaqdhaqaaqa Teknolojiyada» labadaba lama ogaan karo. Si kastaba ha noqotee, runtu waxay tahay inay leeyihiin asal aad u caam ah, isla markaana wadaagaan taariikh isku mid ah oo leh ujeedooyin isku mid ah, labadaba aragtida farsamada, siyaasadda iyo bulshada.
Sheeko caadi ah oo inta badan laga sheego asalka Teknoolajiyada Macluumaadka iyo Isgaarsiinta ee hadda jirta (ICT) wax ka yar 100 sano ka hor., gaar ahaan bilawgii «Internetka» iyo tiknoolajiyada la xidhiidha fikradda ah "Internetka waxyaabaha".
Iyo ujeeddooyinka guud ee badanaa la xiriira asturnaanta iyo amniga shaqsiyaadka. Iyo mid kasta oo awood u leh inuu wax barto, wax baro, abuuro, wadaago, isticmaalo oo wax ka beddelo wax kasta (farsamo ama aan ahayn) inta ay ku dhex gaari karaan bulshada maanta. Waxaas oo dhan si ballaadhan laakiin leh saameyn xag-jir ah, wax-ku-ool ah iyo hal-abuur leh, oo ku saabsan tirada ugu badan ee suurtogalka ah ee dadka heer kasta oo bulsho, dhaqaale iyo siyaasadeed, iyo iyada oo aan la istaagin xuduudaha juqraafi, diimeed iyo dhaqan.
Iyo ujeeddo wadaag ah oo ah abuuritaanka jiil cusub oo muwaadiniin ah iyo dhaqdhaqaaqyo muwaadin ah oo doorbidaya / ama ku guuleysanaya isbeddellada naftooda, iyo bulshooyinka iyo dowladooda. Taasi waxay markeeda abuureysaa tusaalooyin cusub oo hal-abuur leh oo ku saabsan moodooyinka dowladnimada, wada noolaanshaha, wax soo saarka, waxbarashada, tababarka, barashada iyo abuurista, iyadoo la raacayo mabaadi'da sharafta iyo ixtiraamka leh ee soo socota: "Bilaash, Furan, La Heli Karo iyo Ammaan."
Dhaqdhaqaaqyada farsamo-siyaasadeed iyo / ama Teknolojiyada-bulshada
Maaddaama Aadamigu ku horumaray teknoolojiyadda, wuxuu soo maray heerar kala duwan, heerar kala duwan ama digrii ah, iyadoo ku xiran hadba gobolka meeraha, taas oo ah waddamada ama qaaradaha. Laga soo bilaabo kacaankii tikniyoolajiyadeed ee warshadeed ee ugu dambeeyay ilaa kacaankii tikniyoolajiyadeed ee ugu dambeeyay, isbeddelo badan oo siyaasadeed iyo bulsho ayaa dhacay, kuwaas oo iyaguna beddelay xeerarka dhaqaale iyo dhaqan (saldhigyada) dadka iyo / ama bulshada.
Oo sidaas, ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib xilli kasta oo la xiriira ama marxaladda Bini-aadamnimada, kala duwanaansho ayaa soo ifbaxay oo soo kici doona. dhaqdhaqaaqyada ku saleysan adeegsiga tikniyoolajiyadda iyo aqoonta daqiiqad kasta. Dhaqdhaqaaqyada ka dhex muuqda kuwa kale, saameynta ay ku leeyihiin horumarka taariikhda Aadanaha. Laakiin maanta, dhaqdhaqaaqa ugu dhawaaqa waa:
In lagu fahmo si ballaadhan oo macquul ah a "Hacker" waa qof ku xeel dheer cilmiga, farshaxanka, farsamada ama farsamada si aad u fiican ama si fiican u fiican, ama in badan oo ka mid ah isla waqtigaas, isla markaana si isdaba joog ah u doonaya oo u maamula inuu ka gudbo ama ka sarreeyo isku mid iyada oo loo marayo daraasad iyo ku celcelin joogto ah, isaga oo u daneynaya naftiisa iyo dadka kale, taas oo ah, aqlabiyadda.
Fikradan marka laga soo tago waxaa loo qaadan karaa in "Hackers" ay inta badan ku jahwareersan yihiin "Geniuses" ee xilli kasta, sidaa darteedna, waxay jireen ilaa iyo asalka aadanaha laftiisa. Oggolaanshaha ama u xaglinta isbeddelada iyo kacdoonnada iyadoo loo marayo horumarka tikniyoolajiyadeed ee la heli karo xilli kasta.
Iyo imaatinka xilligeenna casriga ah ee ICT (Xogta / Xisaabinta) iyo gaar ahaan internetka iyo internetka waxyaabaha, "Hackers"-ka maanta waa kuwa ku guuleysta teknoolojiyadda casriga ah, isbeddelada muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah iyaga.
Si loo gaaro, marka loo eego, isbeddelada qaybaha kale ee muhiimka ah sida Waxbarashada, Siyaasadda ama Dhaqaalaha, loogu talagalay ama looga soo horjeedo qaybo ama danaha qaarkood, kuwaas oo guud ahaan waxyeelleeya kuwa la hantiyey ama lagu xadgudbay aqlabiyadda, si uun ama qaab kale.
Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ah
In lagu fahmo dareen ballaaran oo wax ku ool ah sida Software-ka Bilaashka ah ee dhammaan qaybtaas Software-ka loo soo saaray shaqsi ahaan ama wadar ahaan mabaadi'da aasaasiga ah ama afarta (4) xorriyadda ee ah:
Iyadoo tan la tixgelinayo, asalka Dhaqdhaqaaqa SL waxaa dib loogu raadsan karaa waqtigii xisaabinta cilmiga ay caam noqotay qiyaastii 50-meeyadii / 60-meeyadii. Halka ugu badan ee barnaamijka ay abuureen isla saynisyahanno kombiyuutar, aqoonyahanno iyo kooxo cilmi baarayaal ah.
Dhammaan dadkaasi waxay u wada shaqeynayeen midba midka kale. Iyo iyagoo kaashanaya kooxaha isticmaala, waxay u qaybiyeen alaabtii ugu dambeysay si ay wax uga beddelaan si loo gaaro qabanqaabada lagama maarmaanka ah iyo / ama hagaajinta mar dambe.
Waana qiyaastii 80-meeyadii, markay qaab iyo muuqaalba yeelaneyso, kaas oo hadda ah "Teknolojiyada-bulshada" Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ah iyo GNU / Linux. Tan waxaa ugu wacan soo bixitaanka dhaqdhaqaaq iyo beel diyaar u ah inay qanciso baahida loo qabo in la fuliyo mashaariic bilaash ah oo bilaash ah. Si loola dagaallamo horumarka baaxadda leh ee ugu badan ee softiweerka gaarka loo leeyahay.
Dib ugu noqoshada waqtigii horumarka kumbuyuutarradii ugu horreeyay iyo softiweerku ay ahaayeen ficil wadashaqeyn iyo tacliin qoto dheer. Ilaa maanta, markii ay dhaqdhaqaaqa SL iyo GNU / Linux ay kujiraan meel sharaf ah taariikhda tikniyoolajiyadeed ee ugu dambeysay bulshada maanta. Laga soo bilaabo dhammaan Software-ka la abuuray, Barnaamijka Bilaashka ah iyo qayb weyn oo ka mid ah waxa hadda ah Warshadaha Horumarinta Barnaamijka waxay ku saleysan yihiin mabaadi'deeda (xorriyadaha).
Wax ku biirintan oo ah muujinta farsamada-dhaqameed qiimo leh, shaqsi / wadar (muwaadin) iyo xitaa ganacsi (ganacsi) muhiim u ah adduunka, iyada oo ahmiyad weyn u leh dalalka qaar in ka badan kuwa kale. Dhaqdhaqaaqyada kale ee aan muhiimka ahayn isla markaana ku jira isla safka wax ku oolka ah ee arrintan la xiriira, badanaa waa Dhaqdhaqaaqa 'Cyberpunks Movement' iyo 'Cryptoanarchist Movement'.
Xiriirka ka dhexeeya Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ah iyo Dhaqdhaqaaqa Hacker
Erayo gaagaaban waxaan dhihi karnaa in xiriirku ka badan yahay cadeyn iyo is dul taag. Maaddaama Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ahi uu si dabiici ah uga yimaado Dhaqdhaqaaqa Hacker ee 50s / 60s. Waana illaa maanta jawaab dabiici ah oo ka timid Bulshada Teknolojiyada.
Jawaab aan looga tagin iyada oo loo marayo Ganacsi, Ganacsi gaar loo leeyahay iyo Software xiran (SCPC), maamul xumo ama wax is daba marin gebi ahaanba sababaha awooda sare ee dhinacyada farsamada, dhaqaalaha iyo siyaasada.
Iyo markiisa, Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ah wuxuu siiyaa Dhaqdhaqaaqa Hacker habka saxda ah ee tiknoolajiyada software. Macnaha u oggolaanaya iyaga inay fuliyaan hawsha xaqiijinta iyo ilaalinta casriga iyo xorriyadda tikniyoolajiyadda qayb aad u ballaaran oo ka tirsan Bulshada Aadanaha. Adigoon tixgalin luminta xuquuqdaada asturnaanta, amniga iyo xoriyada shaqsiyadeed iyo wadareed.
Casriyeyn iyo xorriyad tikniyoolajiyadeed oo waliba u eg mid gaar u ah qarashka badan, xaddidnaanta iyo faa'iido darrooyinka isticmaalka SCPC. Gaar ahaan bulshooyinka aan dalalkoodu bixin heerar ku filan oo dakhli ama hanti ah si ay u helaan oo ay u cusbooneysiiyaan.
Ama wadamada Dowladaha ama Qaybaha Dhaqaalaha ay isku dayaan inay ku daydaan ama xakameeyaan tirada badan ee muwaadiniinta iyadoo la adeegsanayo SCPC qaarkood. Barnaamijyada ama barnaamijyada bixiya, qaata iyo / ama suuqgeeya xogteena iyada oo aan la oggolaan ama aan la oggolaan, in lagu soo xadgudbo arrimahayaga gaarka ah ama lagu maareynayo fikradaheenna iyo xaqiiqooyinka jira.
Ka dib markaan akhriyo daabacaadan iyo daabacaadda lagu taliyay gudaha Blog, waxaan kugula talineynaa sii wad akhriska kuwan soo socda «Buugaag dijitaal ah oo la xiriira mowduuca Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ah iyo Dhaqdhaqaaqa Hacker»Gudaha PDF.
Waxaan rajeyneynaa in dhammaan waxyaabahan ay kaa caawin doonaan inaad ku fahamto cabirkeeda saxda ah xiriirka ka dhexeeya labada Dhaqdhaqaaq, taas oo ah, inta udhaxeysa Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ah iyo Dhaqdhaqaaqa Hacker. Taasina waxay ku tahay jeclaanta iyo kobcinta shaqsiyadeed ee mawduuca badankood. Wax ku biirin, shaki ama su'aal kasta oo timaadda, ha ka waaban inaad ka faallooto daabacaadda.
Xusuusnow: «Haddii aad abuurto ama aad isticmaasho Software-ka Bilaashka ah, waxaad horeyba u ahayd Hugo, maxaad ugu deeqeysaa tikniyoolajiyad ahaan halgan siyaasadeed iyo mid bulsho oo keliya iyo hadafyo.»- Ilaa maqaalka soo socda!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Dhaqdhaqaaqyada La Xiriira: Haddii aan isticmaalno Software-ka Bilaashka ah, innaguna ma waxaan nahay Hackers?
Vampire habeenkii dijo
"Haddii aad abuurto ama aad isticmaasho Software Bilaash ah, waxaad horeyba u ahayd Hugo", markaa Microsoft sidoo kale waxay noqon laheyd Hacker, maxaa yeelay waxay hadda ku darsataa Software Free ama maahan? Waxaan ula jeedaa, ma garanayo, mise waan qaldanahay? xD
Jawaab Vampire Night
Mid ka mid ah mudnaanta ayaa dhihi kara: "Marka laga hadlayo caqliga noocaas ah ma jiraan wax dood ah oo suurtagal ah" laakiin Microsoft oo ah "Shirkad Ganacsi oo Caalami ah" waxay runti lacag siisaa "Hacker" badan oo gacanta ku haya "Farshaxanka Software-ka Bilaashka ah" si ay u sameeyaan waxa ugu wanaagsan ee ay qabtaan "Abuur dakhli mulkiilayaasheeda». Sidaa awgeed, iyagu ma ahan Urur Jabhadeed, laga yaabee FSF, Mozilla ama Red Hat ama Suse, laakiin waligood Microsoft.
Mu'asasada Linux waxay hirgalisay ELISA mashruuc loogu talagalay nidaamyo aad loogu kalsoonaan karo